JD လက်အောက်ခံ JDT သည် ၂၀ ၂၂ ခုနှစ် တွင်ဟောင်ကောင် IPO တွင်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံမှ ၂ ဘီလီယံအထိ မြှင့်တင် လိမ့်မည် - Pandaily
JD လက်အောက်ခံ JDT သည် ၂၀ ၂၂ ခုနှစ် တွင်ဟောင်ကောင် IPO တွင်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံမှ ၂ ဘီလီယံအထိ မြှင့်တင် လိမ့်မည်
Jan 25, 2022, 12:06ညနေ 2022/01/25 14:07:57 Pandaily
အရIFRတနင်္လာနေ့ တွင်တရုတ် အီလက်ထရွန်နစ် စီးပွားရေး ကုမ္ပဏီကြီး JD.com ၏ လက်အောက်ခံ JDT သည်ယခုနှစ် ဟောင်ကောင်တွင် IPO တစ်ခု စတင် ရန်စီစဉ် ထားပြီး ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံမှ ၂ ဘီလီယံ အထိရှိသည်။ JDT ကေတာ့ ဒီ သတင္းကို မွတ္ခ်က္ ေပးဖို႔ ျငင္းဆန္ ခဲ့ပါတယ္။
JDT သည် Bank of America, CITIC Securities နှင့် Haitong International Securities Group Limited တို့နှင့် ပူးပေါင်းပြီး IPO အပြည့်အ ၀ မတိုင်မီ ကန ဦး ငွေကြေး ရှာဖွေ နိုင်သည်။
JD.com သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ Fintech ဌာန ခဲြ ကို ခဲြျခား ခဲ့ၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ သံုး ႏွစ္အတြင္း အနည္းဆံုး ႏွစ္ႀကိမ္ အမည္ ေျပာင္းလဲ ခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတိုင်မီက ဌာနသည် JD.com Finance ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် JD.com Digital Technology နှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် JDT ဟုအမည် ပြောင်း ခဲ့သည်။ JDT သည် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ၊ ဘဏ္ institutions ာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရ အေဂျင်စီ များနှင့်အခြား နယ်ပယ် များရှိ ဖောက်သည်များအား တန်ဖိုး ကွင်းဆက် တစ်ခု လုံးတွင် နည်းပညာ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဖြေရှင်းနည်း များကို ပေးအပ် ရန် ကတိက ဝတ်ပြု ထားသည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် JD.com Digital Technology သည် ရှန်ဟိုင်း သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ဘုတ်အဖွဲ့ (Star Market) တွင် စာရင်း ပြု ခြင်းဖြင့် ယွမ် ဘီလီယံ ၂၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃. ၁၆ ဘီလီယံ) မြှင့်တင်ရန် လျှောက်လွှာ တင်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ April ပြီလ ၂ ရက်နေ့တွင် ရှန်ဟိုင်း စတော့အိတ်ချိန်း သို့ စာရင်း ဖျက်သိမ်း ရန် လျှောက်လွှာ ကို တင်သွင်းခဲ့သည်။
အလားအလာ များအရ JD.com Digital Technology ၏ ၂၀ ၁၇၊ ၂၀၁၈ နှင့် ၂၀၁၉ တို့ ၏စုစုပေါင်း လည်ပတ်မှု ဝင်ငွေ မှာယွမ် ၉. ၀၇ ဘီလီယံ၊ ယွမ် ၁၃. ၆ ၁၆ ဘီလီယံ နှင့် ယွမ် ၁၈. ၂ ၀၃ ဘီလီယံ ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ ပထမနှစ်ဝက် တွင် ၀ င်ငွေ သည်ယွမ် ၁၀. ၃ ၂၇ ဘီလီယံ သို့ တိုးတက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဝင်ငွေ အားလုံး ထက်ပိုမိုမြင့်မား ခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ မှ ၂၀၂၀ ပထမနှစ်ဝက် အထိ မိခင် ကုမ္ပဏီ၏ ရှယ်ယာရှင် များ ပိုင် ဆိုင်သော အသားတင် အမြတ်/အရှုံး သည်-3.82 ဘီလီယံ၊ ယွမ်သန်း ၁၃၀ ၊ ယွမ်သန်း ၇၉ ၀ နှင့် ယွမ်သန်း ၆၇ ၀ အသီးသီးရှိသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အသားတင် အမြတ် သည် အပြုသဘော ဆောင်ခဲ့သည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ တွင်တရုတ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များသည် ရှန်ဟိုင်း နှင့် ဟောင်ကောင်ရှိ Ant Group ၏ စာရင်းကို ရပ်ဆိုင်း ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ အရာရှိများသည် အင်တာနက် ပလက်ဖောင်း များနှင့် နည်းပညာ ကုမ္ပဏီများ မှပေးသော ဘဏ္ services ာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကို စည်းမျဉ်း အသစ်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Ant Group နှင့် JDT ကဲ့သို့သော fintech ကုမ္ပဏီများ ၏လုပ်ငန်း ပတ်ဝန်းကျင် ကိုပြောင်းလဲ စေခဲ့သည်။